WARBIXIN:Loodinta Puntland & Lahashada DFS oo lur ku ah mustaqbalka ardayda
GAROWE(P-TIMES)- Tan iyo markii uu bilaabmay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland oo salka ku haya arimo badan ayaa waxaa saamaynta khilaafkaasi waxaa laga dareemay deegaano badan, kadib markii wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre uu shaaciyey in ardayda Puntland ay waajib ku tahay inay galaan imtixaanka shahaadiga ah taas oo ka dhigan in hadii aysan ka qayb galin aysan heli doonin shahaadada dugsiga sare.
Arintani oo sii xoojisay xurgufta iyo khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay bulshada qaybaheeda kala duwan, waxaana dhinacyada siyaasada iyo xukuumadda Puntland ay si toos ah u dureen dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen in ay ku kacday arin ka dhan ah mustaqbalka ardayda Puntland.
Qaar kamid ah xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada Puntland ee Baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay xiligaasi ayaa ka hadlay khilaafka dhanka waxbarashada ee u dhaxeeya dowladda dhexe iyo Puntland, waxaana ay si kuluul uga jawaabeen hadal uu wasiirka waxbarashada dowladda federaalku uu siiyey warbaahinta, kaas oo ay ku sheegeen in dowladdu ay ku fashilantay la shaqaynta dowladd gobaleedyada.
Sidoo kale xildhibaanada ayaa kulankoodaasi ku xusay in nasiib darro ay tahay in arday Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool deegaannada Puntland oo fasalka 12-aad dhameeyey dhib iyo dhaaqaalo yari dalka ka jiro darteed aanay helin taageero dowladeed in mustaqbalkooda mugdi la galiyo, waxaana kulankooda ay kasoo saareen wax murtiyeed ka koobnaa qodobo dhowr ah kuwaas oo badankood ay ku dhaliileen dowladda.
Sidoo kale wasiirka waxbarashada Puntland oo isna warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Garowe ayaa ku tilmaamay hadalka kasoo yeedhay Goodax Barre mid aan munaasib ku ahayn ardayda iyo dowladda Puntland isla markaasna dowladda dhexe ay ka baxday heshiisyo dhowr ah oo la wada gaadhay.
Waxa uu sheegay in Puntland aysan waxba u noqon doonin hadalka kasoo yeedhay wasiir Goodax isla mar ahaan taana Puntland ay hore u qaadi jirtay imtixaankeeda shahaadiga ah siina wadi doonto.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni oo haatan xidhiidh wanaagsan uusan kala dhaxayn xukuumaddiisa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa isna dhankiisa ku tilmaamay arintaasi mid Puntland lagu khal khal galinayo dowladda dhexena aysan marnaba raali ka ahayn jiritaanka dowladd goboleedyada oo qas ka abuurayso deegaano badan.
Jaamacadaha ku yaala dalka ayaa intooda ay u kala jihaysteen ardaydii ka baxday dugsiyada sare ee Puntland, waxaana sanadkani aan jirin arday u baxday dalka dibadiisa si ay u sii horumariyaan aqoontooda sababo la xidhiidha xiisadaha u dhaxeeya Puntland iyo dowladda dhexe oo saameeyey mustaqbalkoodii waxbarasho.
Arinta ugu daran ayaa ah in mugdi la galiyey mustaqbalka ardaydaasi oo aan waxba galabsan isla markaasna dowladdu khilaafka kala dhaxeeya Puntland ay u cuskatay arimahaasi.
Loodinta Puntland iyo lahashada dowladda dhexe ayaa lur ku abuurtay mustaqbalka ardayda Puntland, waxaana labada dhinac oo isku haya arimo siyaasadeed dhexdooda ku baaba’ay arday mustaqbal doon ah oo rajo badan ka leh noloshada iyo waayaha dambe ee aduun, kuwaas oo dhinacnaba aan raacsanayn.